SingForYou.net - A Yin Lo
Tags :ayin lo......... Minkha~!
By : Minkha on Feb 22, 2010
Score: 150 Rating: 5.00 Comments: 31
A Yin Lo's Description
the khan arr pay kya tae SFY ka nyi ako mg nha ma myar arr lone kyay zu par!........ >>>>>>> Minkha~!
darklight on Feb 27, 2010 0
orange on Feb 23, 2010 0
မတွေ့တာ ကြာပြီနော်...bro ရေ....နားထောင်လို့ အရမ်းကောင်းတယ်...5*4u....:)))
ain gyee lay hla lite tar........ae! hope par buu.......so htar tar lay kg lite tar........MK lal khan sarr chat tway shi nay pye htin tal.......asin pyay par say.....*******
skywalker on Feb 23, 2010 0
ရုပ်မြင်သံကြားတို့ က တော့ ကွာ... ငါ ဘာပြောမယ်ဆိုတာ..သိမယ်ထင်တယ်...သနားစရာ..ကုလားမသာ..အဲလေ..ကောင်းပါ၏..
wow.. nice2listen par shint ... arr pay thwar par tel bro yay .... bravooo ... 5*4u :))))
pp01 on Feb 23, 2010 0
yeah ..ayin lo style hote tawt buu..hee hee ayin lo tawt.. pae tawt myar thay tal..j/k nawt bro lay.. khan sar chat apyae nae sing htar tar taw taw listen lot kg tal:D*****
အရင်လို ဝက်နဲ့ ဆိုတယ် ... အရင်လို ညာဘက်ကို ခေါင်းစောင်း ပြီး လက်ထောက် ... အရင်လို လေးမွန် ထွေးမွန် ဒီဇိုင်း ဆံပင်ကို ပင့်တင် ... အရင်လို ဆေးလိပ်သောက်တော့ဝူး .... ဆင်ဆာမိသွားတာလား ... :P:):D ... စည်သူလွင် နဲ့ တူဒယ် ဒါပေမယ့် ပိုနု တယ် ... စီတို့ ဟူး ... ထမင်းနဲ့ စား ... :P:):D အသံကောင်း အဆိုကောင်းလို့ ကြိုက်၏ ...... ၅စတားစ် ... :P:):D
ဘယ်ဆေးလိပ်သောက်မလဲဗျ ..ဒီကောင်ဆင်ဆာအကြီးအကျယ်မိသွားတာ ....
thuyeekg on Feb 23, 2010 0
အင်း ဘယ်လိုပြောရမလဲ ...... ဘာပြောရမှန်းတောင်မသိဘူး ချောတယ်လို. ခွိခွိ
lalaynge on Feb 23, 2010 0
ငိုတောင်ငိုချင်လာပီ ဒီသီချင်းနားထောင်ပီး အဆိုကောင်းရုပ်ချောလေးရေ..******
myautmuulal on Feb 23, 2010 0
arrrr , di song ko ta khar mha ma listen bu bu ,, now mha listen bu tar , arr pae twar bar tal , kg bar tal,,,a kone lone kg bar tal , smoking tar ka lwal lope:P
Minkha on Feb 23, 2010 0
:) thanks myautkalay yay....... >>>>>>>>> Minkha~!
thetnyein on Feb 23, 2010 0
တကယ်ကောင်းတယ်ဗျာ....အသံကောင်းရုံတင်မဟုတ်ပဲ.. ရုပ်ပါပြစားတော့..ပိုတောင်မိုက်သေး..အဟေးဟေး... :PP
yeyintaung86 on Feb 23, 2010 0
Moe-Z-lay on Feb 23, 2010 0
whitekisslay on Feb 23, 2010 0
Ko minkha yay......thee khan pee narr sinn payy bot ma lo par buuu...:D.....Ayin lo thichin layyy ka vocal nal...lite phet pe narr htoung kaung tal.......5++++*********************for ko minkha....narr sinn arrr payy twer par tal shin:)
ကောင်းတယ် ဘရားသားကြီးရေ အားပေးသွားတယ်ဗျာ ရှယ်ပဲနော့
u4gyi on Feb 23, 2010 0
Bro. Minkha,, so tawr derayan ka liatenlo kg hla del byar ..mite dell
achitsonethu on Feb 23, 2010 0
*opps* ayin loh pae lar te lone lay kaaa lay nelz ayan kg tae song lay par :Clapzzzz mite par ei so twar tar ayan kg ayan lan ayan good par shint ***********)))))
susannyunn on Feb 23, 2010 0
a yan ko nit tat te song lay par......tanar sayr lay nawt....:(((((((((((((((((((((... bro g ta yout hte hel thwar tar........over mood nelz pelz....ngo tot ngo nelz naw.......tisse tay pay kel par te..yautz iintttttttttttt......aheeeeeeeeee;))))))))))) bravoooooooooo.....:clap clap :clap....yote myin tan kyar g yay....>>>>>>>>>>>>>>>>>..
forevermoe on Feb 23, 2010 0
bro minkha ..song lay ka nyein nyein lay naee sooo niceeeeeeeeeeeeee..***********************
seven on Feb 23, 2010 0
~~Real Madrid အကျီလေးလိုချင်တယ်..ဟဟ.... ဆိုထားတာကောင်းပါတယ်..ဆိုပြီးတော့..တန်းပြီးအိပ်ပြီနဲ့ တူတယ်..:D..********************!!~~..
chitmoe2009 on Feb 23, 2010 0
a yan kg par tal Minkha yay...5*4u...:)))))
paradise on Feb 23, 2010 0
အဟက်ဟက်....ချောကလက်ကျွေးမယ်ဆိပြီး ပျောက်သွားတာ ခုမှပေါ်လာတယ်......(လိမ်တယ်ညာတယ် လူညာကြီးရယ် ယုံအောင်ဖြီးတတ်တယ် ) ဟားဟား
nanwarwarmg on Feb 23, 2010 0
ဟဟ..ညီမလေးဒိုက်စ် ကွန်မန့်ဖတ်ပြီး ရယ်လိုက်ရတာ.း))))မနေ့တုန်းက ကိုဘားမာက မမညာတယ်တဲ့.ဆိုသွားတယ်...အခုတော့ မမညာတယ်မဟုတ်တော့ဘူး မင်းခညာတယ် ဖြစ်သွားပြီပေါ့..:Dဆိုထားတာ အရမ်းကောင်းပါတယ် မင်းခရေ။ညီမလေးတွေကို မညာနဲ့နော်....တော်ကြာ မင်းခညာတယ်ဆိုပြီး ဆင်းဖော်ယူမှာ နာမည်ကြီးနေဦးမယ်။း)5stars for u.
yizaw on Feb 23, 2010 0
ldsong ta khar mha ma kyar bu bu nyein nyein lay net good del
koaungkhaing on Feb 23, 2010 0
appear again! So nice as usual. Only the volume was too low (may be my PC problem)
sweetorchid on Feb 23, 2010 0
long time no see bar lar Minka Yae hotakhar ချောကလက် ကျွေးကတည်းကပျောက်သွားတယ် ခုလည်းအရင်လိုကောင်းပါ တယ်...
punttatkaya on Feb 23, 2010 0
အိုးမို့...အိုးမို့....အကိုကြီးအ၇မ်းမိုက်နေပါလား...ဆိုသွားတာတကယ်မိုက်တယ်....:atb pal my bro G..***********
chan2008 on Feb 23, 2010 0
haha.. love your Oh Mo Oh Mo!!!- ပေါက်တကရရေ.. နယ်သားရေ... ဘီလိုပြောရမလဲ... ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမလား... အင်း ပေါက်တကရ ပြောလိုပဲ... အင်း.. hote pa tot...ayannnnnnnnnn mite loon loe... စွန့်တော့မယ်ဗျာ... အရင်လိုပဲ ကျွန်တော်တို့ SFY မိသားစု က အားပေးနေပါတယ်... အားပေးသွားတယ်ဗျာ... နယ်သူ ချမ်း၂၀၀၈
Feedback : 61